Dowladda Soomaaliya ma furin dagaal oo horleh ayaa ku furantay? - BBC News Somali
Waxaa siyaasiyiintii ku shiray Nairobi kamid ah wasiiro hore
"Soddonkii sano ee ugu dambeysay waxa caada noqotay in mucaaradka Soomaalida marka ay ka caroodaan dowladda inay tagaan dalalka deriska ah, waxaa ka soo xirantay dalalka Itoobiya iyo Eritrea, marka wadanka keliya ee u furan oo ay kaga hadli karaan siyaasadda Soomaaliya wa Kenya". Sidaas waxa BBC-da u sheegay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha geeska Afrika.
Waxay walaac ka muujiyeen qaabka dowladda ay wax u wado
Cabdiwahaab ayaa "agoon siyaasadeed" ku tilmaamay siyaasiyiinta, waxana uu inta raaciyay in heshiiskii isdhexgalka ee dhexmaray dalalka Itoobiya, Soomaaliya iyo Eritrea uu meelo badan ka soo xiray siyaasiyiinta Soomaalida ee wax mucaaradi jiray.
"Wa wax ay la qabsadeen siyaasiyiinta Soomaalida in dalalka deriska ay ku shiraan oo ay wax ka cambareeyaan, waxa ugu habooneyd in gudaha dalka ay ku qabsadaan kullankooda oo wixi talo ah ee ay soo jeedinayaan ay gudaha dalka ka soo jeediyaan", ayuu raaciyay Cabdiwahab.
"Waxaa waajib ah in xaqa dastuuriga ah ee qofka la eego oo hoteellada loo fasaxo ganacsiyadooda, taas ayaa sabab u ah inaan Nairobi ku qabanno shirka, eeddeedana waxaa yeelaneysa xukuumadda," ayuu yiri Cabdifitaax.
"Kenya iyadoo kamid ahayad isdhexgalka geeska Afrika ayaa haddana waxay horaan u diiday in Soomaalida mucaaradka ay ku shiraan dalkooda, hase ahaatee markii uu soo ifbaxay khilaafka labada dal waxa muuqata in wadashaqeyntii aysan soo noqonin".sidaas waxaa yiri Cabdiqaadir Dhaqane oo ah wasiir hore.
War murtiyeed dhowr qoddob ka kooban ayaa laga soo saaray shirka
"Dalkan dowlad ayuu leeyahay, ciddii wax qabsanayso waa inay codsi u soo qorataa wasaaradaha iyo hay`adaha ay quseyso, waayo ammaankooda ayaa lagu sugayaa. Iyaga ayaa doonaya inay dad isu keenaan oo wixii amni darro dhacana dowladda ku eedeeyaan, taasi suurto gal maaha," ayay tiri.
Madaxweynaha Soomaaliya, maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirweynihii cullimada ka sheegay in Soomaaliya ay ka dhaqaaqi la'dahay faragelin shisheeye, isagoona sheegay in aan la kala garaneyn mucaaradnimo iyo wax dumin.